ကောက်ညှင်း လက်နှိပ်မုန့် and ကောက်ညှင်း မုန့်လက်ကောက် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Creative Writing » ကောက်ညှင်း လက်နှိပ်မုန့် and ကောက်ညှင်း မုန့်လက်ကောက်	18
ကောက်ညှင်း လက်နှိပ်မုန့် and ကောက်ညှင်း မုန့်လက်ကောက်
Posted by ဇီဇီ on Aug 21, 2015 in Creative Writing, Food, Drink & Recipes, How To.. | 18 comments
မွှေး ကောက်ညှင်းမှုန့် – ၃ ထုတ်
မွေး ဆန်မှုန့် – အထုတ်ဝက် (ကျနော်ကတော့ မထည့်ဘူးးး ပိုအိအောင်)
Red small bean – နို့ဆီဘူး တစ်လုံး
ထန်းညက်အကြီးး – ၅ခဲ
ဒီ အချိုးနဲ့ မုန့် ၁၀ ခုလောက် ရတယ်။
၁) ပဲကို နူးအောင်ပြုတ် ရေစစ်ပြီး အအေးခံထားး
၂) ထန်းညက်ရည် ကြိုထား
၃) ကောက်ညှင်းမှုန့် ကို ရေနည်းနည်း ဆီ ထည့်ထည့်ပြီး နဲ နှဲထားး၊ ပုံသွင်းဖို့ အခြေအနေရောက်တဲ့ထိလောက်ပေါ့
၄) အိုးးပြားး ပေါ် ဆီ သုတ် မီးအေးးအေးးတင်
၅) ကောက်ညှင်းး ယူ အိုးး ထဲ လက်နဲ့ နှိပ် ပြီး ဖြန့်
၆) ပဲ ကို ပုံ ကောက်ညှင်းး သားးပေါ် ဖြန့်
၇) အဲဒီ အတိုင်းး ပါးပြီး ပြန့်တဲ့ ထိ နှိပ် (သစ်သားး ယောက်မ သုံးလည်းရတယ်)
၈) ပဲ ကို ကောက်ညှင်းသားးထဲ ပျံ့စေချင်တာ
၉) ဆီရော ပဲရော ပျံ့ ပြီးး အနားးလေးးတွေ ပူလာ ရင် ငှက်ပျော ဖက်ပေါ်တင်
၁၀) ထန်းညက်ရည်ဆမ်းး စားး..
အိချိုဆိမ့် လေး စားလို့ ကောင်းးးး
တလက်စ တည်း လက် ပါ တဲ့ ကောက်ညှင်း မို့ မုန့်လက်ကောက်ကို ဆက်ကြော်လိုက်တယ်။
သများ စားဖိုမှူးတွေက ညီတယ်ရယ်။
ကေဇီ – မွှေး ကောက်ညှင်းမှုန့် – ၁ ထုတ် ကို လက်ကောက် ၁၀ ခုရတယ်။ လက်စွပ် ဆို ၃၀ လောက်ရမယ်ထင်။ ခိခိ ရေ ထည့် ဆားထည့်ပြီး နှဲ။ လက်ကောက် အဝိုင်းလေး ဝိုင်းလို့ ရတဲ့ အရွယ် ဆို ထည့်ကြော်လိုက်တာပဲ။
တစ်ချို့က ကုလားပဲမှုန့် နည်း နည်း ဆန်မှုန့်နည်းနည်းထည့်တယ်။
မွမိုးခိုင် – အမ က ယိုးဒယား ကောက်ညှင်းမှုန့်နဲ့လုပ်တာ။ ပဲကပ်ကြော်ကို ကျ ကောက်ညှင်းလုံးကိုပြားပြားလေးလုပ်ပီးပဲကပ်ပီးမီးအေးအေးနဲ့ကြော်လေမီးများရင်တူးပီးမကျက်မှာကြောက်လို့
မွဘုတ် – ဆန် တစ် ကောက်ညှင်း နှစ် အချိုးကို တိုဖူးကြိုမဲ့ ပဲရေနဲ့ နယ်တာ။ မပေါက်ဝူး ဒီတစ်ခါ။
ကေဇီ – မွှေး ကောက်ညှင်းမှုန့် – ၁ ထုတ် ကို လက်ကောက် ၁၀ ခုရတယ်။ လက်စွပ် ဆို ၃၀ လောက်ရမယ်ထင်။ ခိခိ ရေ ထည့် ဆားထည့်ပြီး နှဲ။ လက်ကောက် အဝိုင်းလေး ဝိုင်းလို့ ရတဲ့ အရွယ် ဆို ထည့်ကြော်လိုက်တာပဲ။ တစ်ချို့က ကုလားပဲမှုန့် နည်း နည်း ဆန်မှုန့်နည်းနည်းထည့်တယ်။
black chaw says: စောစောစီးစီး ပထမဆုံး ကွန်းမန့် ဖြစ်အောင် ၀င်ရေးသွားပြီဗျာ…။
ဒါပေမယ့် ဆန်နဲ့လုပ်တာလား ကောက်ညှင်းနဲ့ လုပ်တာလား
စားလို့ ကောင်းတာပဲ သိတာပါ…။
ဇီဇီခင်ဇော် says: ပထမဆုံး ကော်မန့်အတွက် ကျေးကျေးပါ ကိုဂျီးဘက်။ ခါတလေ မသိတာပဲ ကောင်းပါတယ်ဗျာ။
စားကောင်းရင် စားမယ် ဆိုတာကပဲ ကောင်းပါတယ်။
Mike says: .မုန့်လက်ကောက်ကြိုက်တယ်…အပေါ်က လက်နှိပ်မုန့်တော့ ခုမှာကားဖူးမြင်ဖူးတယ် .မုန့်လက်ကောက် ကိုထန်းလျက်ရည်နဲ့တို့စားသွားတယ်နော Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12398
ဇီဇီခင်ဇော် says: လုပ်စားကြည့် မလွယ်ပဲ နဲ့ ခင်ဇော် ဘာမှ မလုပ်။
တောင်ပေါ်သား says: ပဲကပ်ကြော်စားချင်တယ်
ဇီဇီခင်ဇော် says: အီးမေးကနေ ပို့ပေးရမား???
ဦးကျောက်ခဲ says: မုန့်လက်ကောက်တို့ မုန့်လက်စွပ်တို့ ဘာပဲကြော်ကြော် ဆန်ကာအုပ်ပြီးကြော်ပါ…
အရသာရှိတာလေးကို မမြည်းရသေးခင် ဆီပေါက်မှန်လို့ အပူလုံးတွေကြွသွားမယ်…
ကောက်ညှင်းကျည်တောက် ၊ ကောက်ညှင်းထုပ် ၊ ပြာရည်ထုပ်လည်း ကောင်းတာပဲ…
ကောက်ညှင်းကိုမုန့်ထက်စာရင် ကဇော်ဖောက်ပြီး လှော်စာလုပ်တာ ပိုကြိုက်တယ်…
အာဟိ … အစာကြေ ရင်ချောင် ချိုပြင်းမွှေးလေး … ခိ ခိ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12398
ဇီဇီခင်ဇော် says: အဲဒီ ကောက်ညှင်းမုန့်တွေက မနှစ်က ရေးပြီးသားမို့။
စလောင်းကို ဒိုင်းသဖွယ်ထား၍ ကြော်ရန်ပေါ့
weiwei says: နှမ်းကပ်​ပြီး အပွအလုံးကြီးဖြစ်​​အောင်​ ​ကြော်​ကြည့်​အုန်းမှာ ။ ဖြစ်​ရင်​​တော့ လာပြမယ်​။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12398
ဇီဇီခင်ဇော် says: မုန့်လုံးကြီး ကြော် လိုမျိုးလားးး
Ma Ma says: ကောက်ညှင်းတပြည် ဆန်၂လုံး
ဆန်တပြည် ကောက်ညှင်း၂လုံး ဆိုတဲ့ အချိုးကို အလွတ်ကျက်ထားတာ။
အမေ့အဒေါ်အဖွားတွေက ကောက်ညှင်းမုန့် ဆန်မုန့်တွေ လုပ်ရောင်းဖူးလို့ ကျွမ်းတယ်။
မြေးတွေထဲမှာ မုန့်လုပ်တာ စိတ်ပါပြီး သူတို့အမွေကို ဆက်ခံခဲ့တာ ကိုယ်တစ်ယောက်ပဲ ရှိတယ်။
လုပ်ချင်တာပဲရှိပြီး လက်ရာကောင်းသလားဆိုတော့ မိသားစုတွေက မလုပ်ပဲနေရင် ဘယ်လောက်ပေးရမလဲတဲ့။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12398
ဇီဇီခင်ဇော် says: မမ ပြောတဲ့ အချိုးကို ခုမှ သိလို့ စိမ်းလိုက်ပြီ
အောင် မိုးသူ says: မွှေးကောက်ညင်းနဲ့ ဆို အဲ့လိုဖြစ်တယ်ပေါ့။ တခါတလေ ဂျတ်ပိတ်ကြီး ဖြစ်သွားတတ်လို့။
ဇီဇီခင်ဇော် says: ကြော်ကြော်ပြီးချင်းတော့ စားရတယ်။
aye.kk says: အိပ်မှာတော့အလွယ်ပဲလုပ်စားလိုက်တာပါ။
ဒီမှာ ကျ ကောက်ညှင်းမှုန့် လွယ်လွယ်ဝယ်မရဘူးး
မွှေး အထုတ် မျိုးစုံဝယ်လာရတယ် တီအေး ရေ။
Alinsett @ Maung Thura says: ပဲကပ်ကြော် ကြွပ်ကြွပ်ပွပွလေးကို အချဉ်ရည် ချဉ်ချဉ်စပ်စပ်လေးနဲ့ တို့ စားရတာကို ကြိုက်တယ်။
ဇီဇီခင်ဇော် says: နိပြောတဲ့ ပဲကပ်ကြော်က ဆန်မှုံ့နဲ့ လုပ်တာ။
အဟိဟိ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike LeaveaComment Cancel replyYou must be logged in to postacomment.	My Points	You need to be logged in to view your points.